iOS 8 အသုံးပြု၍ iPad မှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 8 အသုံးပြု၍ iPad မှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
အိုင်ပက်ဒ်သတင်း | | iOS 8, သင်ခန်းစာများနှင့်လက်စွဲစာအုပ်
Apple သည် FaceTime မှတဆင့်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများကို iOS နှင့် Mac စက်များအားလုံးသို့ချဲ့ထွင်နေစဉ်၊ iPhone ကိုကန့်သတ်ထားတယ်ယခုအထိ။ ဥပမာ၊ သင်သည် Mac ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်သို့မဟုတ် iPad ကိုအသုံးပြုနေစဉ်နှင့်သင့် iPhone သည်အခြားအခန်းတစ်ခန်း၌ရှိနေစဉ်ဖုန်းခေါ်လျှင်သင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
ယခုတွင်သင်သည် iOS 8 နှင့် Mac OS X Yosemite ကိုအသုံးပြုပါကသင့်ဖုန်းကို iPhone သာမက iPad နှင့် Mac တို့တွင်ပါဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ Continuity လို့ခေါ်တဲ့ function အသစ်ကိရိယာများအားလုံးသည်တူညီသော Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုတည်းနှင့် iCloud အကောင့်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်နေသမျှကာလပတ်လုံး၎င်းသည်အသုံးဝင်လိမ့်မည်။
သင်၏ iPhone ကို အသုံးပြု၍ iPad, iPod touch သို့မဟုတ် Mac မှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းများကိုမည်သို့လက်ခံမည်နည်း
-app ကိုဖွင့်ပါ setting များကိုအပိုင်းကိုသွားပါ iCloud သင်၏ကိရိယာအားလုံး iCloud အကောင့်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းစစ်ဆေးပါ။
-အဓိကချိန်ညှိချက်များမြင်ကွင်းသို့ပြန်သွားပြီးအပိုင်းကိုထည့်ပါ FaceTime။ ရွေးချယ်မှုသေချာပါစေ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု iPhone ၎င်းသည်သင်၏ iPad နှင့်သင်၏ iPhone နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
-ကိရိယာနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်ပါ တူညီတဲ့ Wi-Fi ကွန်ယက်ကို.
-ယခုတွင်သင်သည်သင်၏အိုင်ပက်၏ contacts application ကိုဖွင့်နိုင်သည်၊ မည်သည့် contact နှင့်မဆိုနှိပ်ပါ ခေါ်ဆိုမှုကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်.
-ဤလုပ်ဆောင်မှုသည် iPhone နှင့်ဆင်တူသည့် app တစ်ခုကိုဖွင့်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်မိုဘိုင်းစက်မှခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နေကြောင်းသင့်အားအသိပေးလိမ့်မည်။
-မင်းလည်းတွေ့လိမ့်မယ် သင့်ရဲ့ iPhone ပေါ်မှာနဖူးစည်းစာတန်း ခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်နေကြောင်းညွှန်ပြ။ သင်သည်ဤနဖူးစည်းစာတန်းကိုနှိပ်လိုက်ပါကဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းသည်ပွင့်လာလိမ့်မည် ဖုန်းမှခေါ်ဆိုမှုကိုသင်ဆက်လက်ပြုလုပ်နိုင်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 8 » iOS 8 အသုံးပြု၍ iPad မှဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း
José Carlos အားပြန်ပြောပါ
အိုင်ပက်ဒ် ၂ တွင်ပါ ၀ င်မှုမရှိခြင်းက feint ကိုပိတ်ပြီးပိတ်လိုက်သည်
Paco Pil ဟုသူကပြောသည်
Paco Pil မှစာပြန်ရန်
Jose Angel ဟုသူကပြောသည်
ငါ့ ipad လေကောင်းလေပဲ။ Mac နဲ့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်နိုင်မလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Jose Angel သို့ပြန်သွားပါ
Mac ပေါ်တွင်ပြုလုပ်ရန်သင်သည် OS X Yosemite ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုစောင့်ဆိုင်းရန် (သို့) အများသုံး beta ထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်တာနဲ့ငါ့အတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် (iPad4 / iPhone5), ဒါပေမယ့်အခုတော့အလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ အဲဒါအတွက်အဖြေတစ်ခုရှိပါသလား။
ငါ့ ipad mini 16gb ပျောက်သွားတယ်။ ဘယ်လိုရှာရမလဲ။
အခက်အခဲရှိသူများ (သို့) ၎င်းသည်သူတို့အတွက်အလုပ်မလုပ်သူများ၊ ၎င်းတို့သည်အသစ်ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သလား။ Device များတွင်မည်သည့် ios 8 ကိုတပ်ဆင်ထားပါသနည်း။
ငါ့ကိုမှတ်ချက်ပေးသောတူညီသောအရာ။ တခါတရံသူသည်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုရရှိသွားတဲ့။ ငါ့ကိုခေါ်ခွင့်မပြုပါ ဖုန်းအက်ပ်ကိုဖွင့ ်၍ အတုပြုလုပ်ပြီးထပ်မံပိတ် ငါ ipad ကို reset လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်လား?
အကယ်၍ ၎င်းကို (၈.၀.၂.၂) သို့နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်ထားပါက (ကျွန်ုပ်ပွနျလညျထူထောငျမထားပါ)၊ အကယ်၍ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏အိုင်ပက်ဒ်မှထွက်လျှင် (အမှန်တရားအမြဲမဟုတ်ပါ) ခေါ်ဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်လက်ခံရရှိပါက၊ တကယ်တော့ကျွန်ုပ်သည် iPad မှဖုန်းခေါ်ခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။
ကောင်းသောနေ့ Gustavo, ငါ updated နှင့်ငါ့ iPad ကိုပြန်ယူ။ ခေါ်ဆိုမှုများရောက်လာသော်လည်းကျွန်ုပ်လျှောက်လွှာကိုဖြေဆိုရန်ကြိုးစားသောအခါပိတ်သွားပြီးကျွန်ုပ်ကိုဖြေကြားမည်မဟုတ်ပါ။ ဖုန်းခေါ်ရန်ကြိုးစားသည့်အခါတွင်လည်း၎င်းစတင်သည်သို့သော်လျှောက်လွှာပိတ်သွားပြီးကျွန်ုပ်မခေါ်နိုင်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် iPhone 5s (၈.၀ သို့ပြန်ယူပြီး) နှင့် ipad 8.0 (2 သို့ပြန်သည်) ရှိသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်ဘာပြmeနာမှမရှိဘူး။ iPhone 8.0.2 မှယနေ့အထိကျွန်ုပ်လေ့လာသင်ယူပြီးပါပြီ - အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအစားပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုလျှင်မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်သောအရာတစ်ခုအမြဲရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရသည်။ backup တခုပြီးရင် - ငါ iTunes ကိုပိုနှစ်သက်တယ် - restore လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ backup ကိုပြန်ယူခြင်းသည်နှေးသော်လည်း၊ သည်းခံခြင်းကိစ္စဖြစ်မည်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ။ ကျွန်တော့်ရဲ့အိုင်ပက်ဒ် ၆၄ မှာပလီကေးရှင်းတွေပါပြီးစွမ်းဆောင်နိုင်မှုအကန့်အသတ်နဲ့သာရှိနေပြီးတစ်နေ့တာကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော့်ကိုနေရာပိုပေးခဲ့တယ်။ ကံ
ကျွန်ုပ်၏အိုင်ပက်ဒ် ၃ သည်မျက်တောင်ခတ်ပြီးဖုန်းခေါ်နေစဉ်မျက်နှာပြင်သို့ပြန်သွားသည်။ ငါ့မှာ Iphone 3c ရှိတယ်၊ သူတို့က Icloud အကောင့်အတူတူပဲ။
Iphone5ရှိတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့နံပါတ်ကို Settings, Facetime မှာရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မဟုတ်ပါ။
သိသာထင်ရှားတဲ့ဟာ IOS 8.0.2 ရဲ့ကြီးမားတဲ့အားနည်းချက်ပဲ။
အရာရာတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံတယ်၊ တစ်ခုတည်းသောအရာကငါ့ ipad ကနေဖုန်းခေါ်လို့မရဘူး၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ခေါ်ဆိုမှုတွေရတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငါလက်မခံနိုင်ဘူး၊ ဘာလဲ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆင်ပြေပါသည်။ Facetime ကို iPad နှင့် iPhone နှစ်ခုလုံးတွင် activate လုပ်ရုံဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ပြီးတော့သင်နဲ့ Wi-Fi တူညီတဲ့သူနဲ့၊ သင်နဲ့သုံးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဘာကြောင့်ဖုန်းပေါ်မှာစကားပြောချင်တာလဲ။ ဘာအဓိပ္ပါယ်မဲ့တာလဲ။ အထက်ပါ iCloud အကောင့်နှင့်အတူလား။ ကောင်းပြီ၊ မင်း iPhone မှ iPad သို့စကားပြောနိုင်သည်။ စူပါအေးမြ memeces ။
ဒီတော့လူမိုက်တွေ၊ မင်းမှာမင်းမှာ iPhone မရှိဘူး၊ မင်းမှာဆဲလ်ဖုန်းရှိတယ်၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုအတွက်သာသုံးတယ်၊ မင်းပြောတာကအသုံးမဝင်ဘူး၊ မင်းကမင်း iPhone ကိုဖုန်းခေါ်နေရင်၊ သင်၏ iPad သည်စားပွဲပေါ်ရှိအခြားနေရာများတွင်ရှိသည့်အိုင်ဖုန်းကိုသွားစရာမလိုဘဲအိုင်ပက်ဒ်မှဖြေဆိုနိုင်ပြီးသင်လက်ခံရရှိသောဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများသည်ဝိုင်ဖိုင်၊ အိုင်ပက်နှင့် iPhone ပေါ်တွင်ရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ haha ဘာဖြစ်နေတာလဲ haha ​​အဲဒီ function ကိုလုပ်နိုင်ဖို့တူ Wi-Fi ကွန်ယက်တစ်ခုတည်း။
စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆန်းစစ်ခြင်း၊ CPU နှင့် GPU နှင့် iPhone6၏ဘက်ထရီသက်တမ်း
iPhone6ကင်မရာကထွက်လာတာကိုမင်းမကြိုက်ဘူးလား။ သင်အမြဲသဲနိုင်ပါတယ်